Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Taariikhda Hoteelka: Libby's Hotel and Baths, New York, NY
dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Libby's Hotel iyo Qubeyska
Dabayaaqadii 1920 -meeyadii, suuqa saamiyada ayaa sare u kacay, ganacsiyadu waxay ku raaxaysanayeen faa'iidooyin rikoor ah iyo horumariyayaashu waxay dhisayeen dhismayaal cusub si xawli leh.
Shirkadaha guryaha amaahdu waxay bilaabeen inay bixiyaan dammaanad-guri-ku-haynta guryaha, oo ah nooc cusub oo maalgashi.
Mid ka mid ah dhismayaasha cusub wuxuu ahaa 12-sheeko Libby's Hotel and Baths, oo la dhisay 1926-kii geeska Chrystie iyo Delancey Streets ee dhinaca bari ee New York.
Waxay ahayd huteelkii ugu horreeyey ee Yuhuuddu ku raaxaysato oo leh barkad lagu dabaasho oo qurxoon, jimicsi casri ah, qubeysyo Ruush-Turki ah iyo qolal jiif oo u furan bulshada oo dhan.
Soosaaraha wuxuu ahaa Max Bernstein, muhaajir ka yimid Slutzk, Russia, oo yimid New York isaga iyo qoyskiisa 1900 markii Max ahaa 11 sano jir. Waddooyinka uu Max ku koray dhinaca bari-hoose waxaa ka buuxsamay iibiyaasha baabuurta riixa, qaar wata gaadhi-faras-jiidayaal, carruur ciyaaraya dariiqyada iyo dadka deggen guryaha oo ku dhex-xamaasha. Nasiib darro, markii hooyadiis Libby ay dhimatay hal sano gudaheed, Max wuu ka cararay guriga wuxuuna ku hoyday beer yar oo u dhow. Sannadihii dambe, Max wuxuu sheegay in riyadiisii ​​ahayd inuu ka dhiso Libby's Hotel oo ku yaal geeska Chrystie iyo Delancey Streets habeenkaas.
Ka dib sanado badan oo uu lahaan jiray maqaayado taxane ah, oo mid walba loo bixiyay Libby's, Max wuxuu awooday inuu dhul ka helo geeska uu ugu jecel yahay halkaas oo uu ka dhisay huteelkii la furay 5-tii Abriil, 1926. Max wuxuu u muuqdaa inuu ahaa caalim ku dhashay dabiicadda sababtoo ah wuxuu maal galiyay tamar iyo lacag aan caadi ahayn oo ku jirta olole xayaysiis oo ballaadhan wargeysyada maalinlaha ah ee afka Yiddish-ka ku badan. Maalinta furitaanka, the New York Times waxay ku biireen waraaqaha kale iyagoo ka warbixinaya furitaanka weyn. Huteelka Libby wuxuu soo bandhigay hudheel laba dabaq ah oo cajiib ah oo leh saqaf malab ah oo midabkiisu aad u badan yahay oo ay taageereen tiirar marmar la duubay. Hoteelku wuxuu lahaa qolal lagu shiro, qolal kubbadda lagu ciyaaro iyo laba makhaayadood oo kosher ah. Max wuxuu qabtay xaflado samafal iyo fasalo dabaasha oo loogu talagalay carruurta deriska ah.
Hoteelka Libby ayaa laga sii daayay idaacaddii ugu horreysay ee Yiddish, WFBH (xagga sare ee hudheelka hudheelka Majestic) oo ay ka muuqdaan maaweelo caan ah, tiyaatar nool iyo iftiin sida Sol Hurok, Rube Goldberg iyo George Jessel. Bernstein wax kharash ah uma reebin, isagoo u shaqaaleysiiyay agaasimahiisa muusigga Josef Cherniavsky, hogaamiyaha kooxda Yiddish-American Jazz Band oo si weyn loogu yaqaan Yuhuudda Paul Whiteman. Labadii sano ee ugu horreysay, hoteelku wuxuu u muuqday mid guul weyn gaaray laakiin dhammaadkii 1928, saqafkii ayaa soo dhacay.
Cunto ka mid ah hoteelo cusub ayaa laga furay New York. Kuwo badan, si ay u ahaadaan kuwo dareere ah, waxay bilaabeen inay wax u qabtaan Yuhuudda, iyagoo iska fogeeya macmiilkii Max. Max waxaa laga yaabaa inuu si fiican u awoodo inuu tartamo haddii xaaladdiisa shucuureed aysan horay ugu jirin hoos u dhac; Oktoobar 20, 1926, xaaskiisii ​​Sarah ayaa dhimatay. Maxkamad dambe oo maxkamadeed, Max wuxuu ka marag kacayaa in murugada uu la kulmay ay ka tagtay isaga oo aan shaqayn karin.
Intaa waxaa sii dheer, deyn -qaadaha ugu horreeya wuxuu ahaa Shirkadda Dammaanadda iyo Deyn -Deynta Mareykanka (AMBAM), oo ah deyn -bixiye ugaarsiga aan la qiyaasi karin. Wax yar uun ka hor shilkii suuqa saamiyada ee 1929, AMBAM ayaa hoteelka lagu sii hordhigay, si la yaab leh oo qaddar leh, Duqa Jimmy Walker wuxuu u magacaabay Joseph Force Crater, oo ah qareen ku xiran Tammany inuu noqdo qaate. Sida laga soo xigtay garsoore Crater, AMBAM waxaa laga yaabaa inay aqoon u lahayd qorshaha magaalada ee ballaarinta Jidka Chrystie. Si kasta oo ay tahay, AMBAM waxay hadda sheegatay in huteelku qiimihiisu yahay $ 3.2 milyan (ka dib markii uu ku qiimeeyay Libby's Hotel $ 1.3 milyan oo keliya si loo la wareego). Iyada oo loo marayo domain caan ah, Magaalada New York waxay qaadatay lahaanshaha waxayna siisay AMBAM $ 2.85 milyan. Magaaladu waxay markaa burburisay dhismayaashii ku dhex jiray baloogga oo ay ku jiraan Max Bernstein's Libby's Hotel iyo Baths.
Laakiin waxaa jira sheekada oo kale. Sannadkii 1931, AMBAM waxaa lagu xukumay qorshe la mid ah oo ku saabsan Hoteelka Mayflower ee Washington, DC Isla Garsoore Crater ayaa ahaa qaataha la -wareegidda Mayflower. Waxa la waayay afar bilood ka dib ilaa iyo hadda lama helin. Jidkii Chrystie waa la ballaadhiyay, Diiqaddii Weynayd ayaa soo gashay aakhirkiina, goobtii waxaa loo beddelay Sara Moses Delano Roosevelt Park.
Markii Max Bernstein dhintay 13 -kii Diseembar, 1946 -kii New York Times Xusuus -qorkii wuxuu qoray: “Max Bernstein, 57 -jir, Lahalaha Huteelka… Wuxuu ka dhisay $ 3,000,000 Edifice Xaafadaha isku raranka ah, kaliya si uu u arko Xusuusta Hooyo La Burburiyey.”
Taasi waxay ku dhammaan doontaa sheekadan xiisaha badan marka laga reebo Pakn Treger* maqaalku wuxuu ka warbixiyay taxanaha soo socda:
Sheekada Libby waxay ku dhacday mugdi ilaa xagaagii 2001, markii qayb ka mid ah laamiga oo u dhow geeska Chrystie iyo Delancey Streets la dhex galay, oo la abuuray god -biyood. Daloolku wuu weynaaday si uu u liqo geed dhan wuxuuna bilaabay inuu ku xad gudbo waddooyinka magaalada iyo xarunta sare ee u dhow ee Sara Delano Roosevelt Park. Maalmahaas aan waxba galabsan ka hor Sebtembar 11, godka godku wuxuu u muuqday inuu yahay halista ugu weyn ee soo foodsaartay Manhattan hoose.
Injineerada magaalada ma garanayn sababta, sidaa darteed waxay hoos u dhigeen kamarad meel bannaan. Layaabkooda, 22 fiit oo dhulka hoostiisa ah ayay heleen qol aan hagaagsanayn, oo ay ka buuxaan boorsooyin buug. Markii ay baadheen diiwaanka kaydka dawladda hoose, waxay ogaadeen in huteelka Libby uu hal mar taagnaa oo ay heleen qol ku yaal hoosaadkiisa. In a New York Times maqaalkii Sebtember 11, 2001, Guddoomiyaha Beeraha Magaalada New York Henry J. Stern ayaa laga soo xigtay isagoo leh, "Waxay i xusuusineysaa Pompeii."
Si ka duwan Pompeii, iskuma dayin in la gaaro qolka ama la qodo. Injineeradii magaaladu waxay doorteen inay ka buuxiyaan walxo, aaska qolka iyo waxyaalaha yaabka leh ee ku jira. Geed cusub ayaa la beeray, beertiina waa la hagaajiyey.
* "Ritz oo leh Shvitz" waxaa qoray Shulamith Berger iyo Jai Zion, Pakn Treger, Guga 2009
Dhamaan buugaagtaan waxaa laga dalban karaa Qoraaga Guryaha adoo booqanaya www.stanleyturkel.com oo gujinaya cinwaanka buugga.